Labaatan sano ayaa laga joogaa tagitaankii Siyaad Barre - BBC Somali
Labaatan sano ayaa laga joogaa tagitaankii Siyaad Barre
Image caption Siyaad Barre
Maanta oo kale, 26-ka bisha January sanadkii 1991, muddo hadda laga joogo labaatan sano, ayaa madaxwaynihii Soomaaliya muddada dheer ka talinayay Maxamed Siyaad Barre jabhaddo hubaysan ay xukunkii ka tuureen oo uu isaga baxay xaruntii madaxtooyada ee astaanka u ahayn hogaaminta dalka.
Maxamed Siyaad Barre, ayaa dhowr iyo labaatan sano oo uu talada dalka hayay, wuxuu ku caanbaxay hal adayg iyo qab-wayni. Waxaa tusaale loogu soo qaadan karaa is afgaranwaagii dhexmaray dowladiisa iyo mid ka mid ah quwadihii todobaatameeyadii dunida ugu awoodda badnaa. Waa midowgii Sovieti. Mar uu ka hadlaya khilaafka wuxuu madaxwayne Maxamed Siyaad Barre yiri:
Maanta oo kale, 26-ka January 1991, muddo hadda laga joogo labaatan sano, iyadoo uu socday dagaal kama dambays ah intii aanu Maxamed Siyaasad Barre ka tagin madaxtooyada waxaa Muqdisho dhex joogay Murray Watson oo sawiro ka qaaday dhibaatooyinka dagaalka.
Waa kan waraysi laga qaaday isla maalintii 26-kii January, 1991 isagoo joogay magaalada Muqdisho.
Prof Siciid Sheekh Samatar, oo jooga Maraykanka oo muddo dheer wax ka qorayay arrimaha Soomaalida, ayaa sidoo kale BBC la xiriirtay.
Yuusuf Garaad ayaa Isagana waydiiyay maanta oo labaatan sano laga joogo markii ay dhacday dowladdii Maxamed Siyaad Barre, waxa uu ku qiimayn karo labaatankaas sano xaaladda lagu jiray. Ugu horayn waxa ay la tahay in laga faa'iiday riditaankiisa Maxamed Siyaad Barre?
Prof Maxamed Malaaq Muqtaar, oo hadda ku sugan dalka Maraykanka, wuxuu wax badan ka qoray taariikhda Soomaaliya, iyadoo uu dalka booqday dhowr jeer kadib burburkii dowladii Maxamed Siyaad Barre.
Yuusuf Garaad, ayaa waydiiyay waxa uu is leeyahay maanta oo laga joogo labaatan sano markii dowladdii Maxamed Siyaad Barre ay burburtay, maxaa laga faa'iiday ayaad dhihi kartaa intii ka dambaysay?
Professor-ka, ayaa si faahfaahsan uga hadlaya guud ahaan taariikhda Soomaaliya iyo burburka laga dhaxlay dhicitaankii dowladda Siyaad Barre.
Wuxuu soo jeedinayaa tallooyin ku aadan sida ay isaga la tahay sida looga bixi karo dhibaatooyin wali ka taagan Soomaaliya wixii ka dambeeyay burburkii dowladda dhexe 26-kii January, sanadkii 1991-kii.